इन्जिनियरले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाबारे के भन्छन् सरोकारवालाहरू ?
इन्जिनियर्स नेपाल | भदौ २९, २०७६,
यतिबेला इन्जिनियरले पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाबारे बहस चलिरहेको छ । चिकित्सकले लाइसेन्सका लागि मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिनुपर्ने भए जस्तै इन्जिनियरले पनि इन्जिनियरिङ काउन्सिलको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी छ । यससम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । इन्जिनियरका लागि लाइसेन्स लिन किन आवश्यक छ ? यस सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विज्ञको राय बुझ्न हामीले विज्ञ तथा जानकारहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ :
परीक्षाले इन्जिनियरको दक्षता प्रमाणित हुन्छ: प्रा.गोकर्ण मोत्रा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस
इन्जिनियरिङ शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा हो । विज्ञानले आविष्कार गरेका प्रविधिहरूलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्ने काम इन्जिनियरिङ शिक्षाले गर्छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षाको आ–आफ्नो विधा छ । जस्तो कि सिभिल इन्जिनियरिङले हरेक निर्माणको कामबारे अध्ययन गर्छ ।
मेकानिकलले मेसिनरी कामको अध्ययन गर्छ । यस्तै इलेक्ट्रिकको आफ्नै क्षेत्र छ । इलेक्ट्रोनिक्सको बेग्लै अध्ययनको क्षेत्र छ । समग्रमा विज्ञानका आविष्कारलाई प्रयोग गर्ने शिक्षा इन्जिनियरिङ शिक्षा हो ।
इन्जिनियरिङ शिक्षा एउटा मात्र क्याम्पस वा एउटै विश्वविद्यालयमा मात्र सीमित छैन । नेपालमा मात्रै पनि ५० भन्दा बढी क्याम्पसले इन्जिनियरिङको अध्यापन गराइरहेका छन् । ती क्याम्पस विभिन्न विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छन् । त्यतिमात्र नभएर विदेशबाट समेत इन्जिनियरहरू अध्ययन गरेर आइरहेका छन् । उनीहरूले लिएको शिक्षा नेपालको परिस्थितिमा काम गर्नका लागि अनुकूल छ कि छैन ? नेपालको आवश्यकताअनुसार आफ्नो दक्षता देखाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ । यदि सकेनन् भने उनीहरूले बनाएका संरचना वा गरेका काममा गुणस्तरीयता हुँदैन ।
फिल्डमा गएर काम गर्न इन्जिनियरको न्यूनतम मापदण्ड तोकिनुपर्छ । न्यूनतम रुपमा कति योग्यता वा सीप भएमा फिल्डमा गएर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा तय गर्न इन्जिनियरिङ काउन्सिलको परीक्षा पास गर्ने र लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यो प्रस्ताव भनेको मेडिकल शिक्षा लिएका चिकित्सकहरूका लागि न्यूनतम योग्यता परीक्षा लिन मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिएजस्तै हो ।
अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था छैन । यतिबेला संसदमा यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । विधेयक पास भएमा इन्जिनियरले पनि लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । हामीले विधेयक पास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिरहेका छौँ ।
संसद्बाट विधेयक हुबहु पास हुनुपर्छ : इ. जनार्दन भट्ट, थापाथली क्याम्पस प्रमुख
अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको छैन । नेपाल इन्जिनिरिङ परिषद् ऐन २०५५ र नियम २०५७ अनुसार परीक्षा लिने व्यवस्था छैन । यस सम्बन्धमा अहिले विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर ऐन संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव पास भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर संसद्मा प्रस्तुत विषय भएकाले त्यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना छ । त्यसपछि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नेछ ।
इन्जिनियरले जुनसुकै विश्वविद्यालय वा देशबाट प्राप्त गरेको उपाधिलाई इन्जिनियरिङ परिषद्मा पेश गरी डकुमेन्ट ठीक हो भन्ने लाग्यो भने उसलाई सदस्यता दिने व्यवस्था छ । यो ऐन संशोधन भएर आयो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जस्तै लिखित परीक्षा लिने र त्यसमा पास भएपछि नै इन्जिनियरको लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनेछ ।
यस्तो व्यवस्था गर्न किन आवश्यक प¥यो भने हिजोको सन्दर्भमा पुल्चोक र थापाथलीजस्ता केही क्याम्पसहरू मात्रै नेपालमा थिए । पढाइमा समानता र एकरुपता थियो । अहिले ७/८ वटा विश्वविद्यालयबाट विभिन्न विधिबाट पठनपाठन गरिने एकद्वार प्रणाली छैन ।
अर्को कुरा विदेशबाट पढेर आउने विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । उनीहरू पनि फरक–फरक विश्वविद्यालयमा अलग–अलग मापदण्ड पूरा गरेर आउने गर्दछन् । ती सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने विधि भनेको त्यही लाइसेन्स परीक्षा हो । त्यसले हाम्रो पेशालाई मर्यादित पनि बनाउने र क्वालिटीमा पनि कन्ट्रोल गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
इन्जिनियरको गुणस्तर र एकरुपता कायम हुन्छ : इ. रमेश श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल, सगरमाथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस
नेपालको इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को परीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । देशबाहिर पढ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई पनि काउन्सिलको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गराएमा इन्जिनियरको गुणस्तर र एकरुपता कायम हुन्छ ।
इन्जिनियरको लाइसेन्स लिन काउन्सिलको परीक्षा अनिवार्य गर्नासाथ योग्य इन्जिनियर काममा आउने र अयोग्य रोकिन्छ । काउन्सिलको परीक्षा नदिए पनि हुने व्यवस्थाले बाहिरबाट पढेर आएको जनशक्ति कस्तो हुन्छ ? हामीलाई थाहा हुँदैन ।
यदि यहाँबाट इन्ट्रान्समा विद्यार्थी उत्तीर्ण भएन र विदेश गएर पढे भने कहाँबाट कसरी सर्टिफिकेट लिएर आउँछन्, हामीले जान्ने कुरा भएन । बाहिर कसरी पढाउँछन्, के पढाउँछन् उसले पनि जानेको हुँदैन । तर, राम्रो मार्कसहितको सर्टिफिकेट लिएर आयो भने त्यही सर्टिफिकेटको आधारमा यहाँको काउन्सिलले ‘ल, ठीकै छ’ भन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण इन्जिनियरहरूको योग्यता जाँच गर्न काउन्सिलको परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
अहिले संसद्मा इन्जिनियरिङ काउन्सिल विधेयक पेस गरिएको छ, यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम हो । यो विधेयकलाई छिटो पास गरेर लागू गर्न आवश्यक छ । एकोनले यो विधेयकलाई स्वागत गर्दछ ।
पहिल्यै हुनुपथ्र्यो, ढिला भयो : धनप्रसाद पौडेल सिइओ, नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ
नेपालका इन्जिनियरहरू नेपाली परिवेशअनुसार त तयार हुनुप¥यो नि ! बाहिरबाट पढेर आएका हुन्छन् । कस्तो पढेका हुन्छन्, के हुन्छन् थाहा हुँदैन । त्यसैले यो विधेयक पहिल्यै आउनुपर्ने हो ।
नेपालबाट प्रोडक्सन भएका इन्जिनियरहरूबाट देश विकासमा सहयोग पुग्थ्यो होला । पास नभएपछि त तयारी गर्नुप¥यो नि ! लस हुनेभन्दा पनि क्वालिटी ‘लो’ भयो भने छ महिना ‘लस’ भए केही भएन ।
फेरि मेडिकलजस्तो इन्जिनियरिङमा २०÷३० वटा विधा हुन्छन् भन्ने पनि होइन । सबैको म्यानेज गरे परीक्षा ६÷६ महिनामा लिनेभन्दा टाइम पनि पुग्नुप¥यो । यो राम्रै काम होजस्तो लाग्यो  ।
‘फेक सर्टिफिकेट’ रोकिन्छ: आ. रोशन थापा मगर स्ववियु सभापति केन्द्रीय क्याम्पस, पुल्चोक
लाइसेन्सको परीक्षा गर्नु एकदमै राम्रो पक्ष हो । किनभने केहीले फेक (झूठो) सर्टिफिकेट ल्याएर लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन् । प्राक्टिसमा जानुभन्दा अगाडि यसको स्ट्याण्डर चेक त हुनुप¥यो नि ! विभिन्न विश्वविद्यालयमा गएर पढ्नेहरू छन् । जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय जहाँतहीँ इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्छ ।
विदेशबाट आउने संख्या पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण गुणस्तर निर्धारण गर्न यो एकदम अपरिहार्य छ । परीक्षामा सामेल हुने कुरालाई गाह्रो भो भन्न मिल्दैन । फिल्डमा काम गर्न जाने विद्यार्थी साथै चार वर्ष पढेको विद्यार्थीमा नलेज (ज्ञान) हुनुपर्छ । एउटा परीक्षा पनि दिन सकेन भने त उसले पढेको महत्व पनि भएन नि ! भारत गएर सर्टिफिकेट ल्याएको भरमा लाइसेन्स पाइन्छ भने त समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्रको बेइज्जत भयो ।
लाइसेन्स परीक्षामा फेल हुन्छु कि भनेर सोच्न आवश्यक छैन । फेल हुने मान्छेले कसरी इन्जिनियरिङ पढ्यो होला ? भोलि उसले कस्तो काम गर्छ ? इन्जिनियरिङ प्राक्टिसमा चाहिने एउटा परीक्षा पास गर्न सक्दैन भने भोलि इन्जिनियरले बनाएको संरचना, सफ्टवेयरहरू कसरी भरपर्दो हुन्छ ? लाइसेन्सको परीक्षा दिन नसक्ने इन्जिनयिरले भोलि कति आउटपुट देला यो कुरा सोच्नैपर्छ । तर, परीक्षा भने पढेर आएको पाठ्यक्रमलाई ‘कभर’ गर्ने किसिमको होस् !
हामीले पहिल्यै माग गरेका हौँ : इन्द्र पौडेल स्ववियू सभापति पश्चिमाञ्चल क्याम्पस
हामीले दुई वर्ष पहिला आईओईको डिन सर त्रिरत्न बज्राचार्यलाई पोखरामा ल्याएर इन्जिनियरिङको परीक्षा हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौँ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेका छौं । जो पायो त्यही इन्जिनियर हुन थाले । भारतमा पढेका र हाम्रो विश्वविद्यालय पढेकाहरूको गुणस्तर एउटै हुन थाल्यो । त्यही भएर एउटा मापदण्ड राखेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यैबाट भन्दै आएका हौँ । धन्न अहिले सुरुवात गरेको छ । परीक्षाचाहिँ कहिले सुरु हुन्छ भन्ने स्थिति छैन ।
परीक्षा दिन नाम र दामका भरमा इन्जिनियर बन्नेहरूलाई गाह्रो हुने हो । जसले इन्जिनियर बन्नकै लागि इन्जिनियरिङ पढेका हुन्, तिनलाई गाह्रो हुँदैन । ६–६ महिना वा तीन महिना अथवा एक वर्षमा परीक्षा लिए पनि लिइयोस् तर यो काउन्सिलको परीक्षा हुनुचाहिँ पर्छ । परीक्षाले इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित बनाउँछ । परीक्षाचाहिँ विद्यार्थी पढेको पाठ्यक्रमअनुसार होस् भन्ने हो ।
६–६ महिनामा परीक्षा लिने कुरा ठीक भएन :पूर्ण बहादुर खड्का स्ववियू सभापति काठमाडौं इन्जिनियरिङ क्याम्पस
काउन्सिलले परीक्षा लिनुपर्छ । भारतबाट आएका इन्जिनियरहरूले भवनहरू राम्रो नबनाउने काम भइरहेको छ । त्यसकारण यो परीक्षा अनिवार्य छ । इन्जिनियरहरूले पढ्न अल्छी गर्नु भएन ।
पढ्न गाह्रो भए पनि पास त हुनुप¥यो नि ! दक्ष इन्जिनियर नभई राम्रो काम हुँदैन । परीक्षा हुनुपर्छ तर, ६–६ महिनामा परीक्षा लिने भन्ने कुराचाहिँ ठीक भएन । यो पाराले विद्यार्थीको एक वर्ष घाटा हुन्छ । एक–एक महिनामा परीक्षा लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।